Rabshadaha Rabshadaha Leh Ayaa Ka Bilaabmay Magaalada Paris Xadgudubka COVID-19 Jabs Iyo Caafimaadka Oo Maraya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » France Breaking News » Rabshadaha Rabshadaha Leh Ayaa Ka Bilaabmay Magaalada Paris Xadgudubka COVID-19 Jabs Iyo Caafimaadka Oo Maraya
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • France Breaking News • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Rabshado rabshado wata ayaa ka qarxay magaalada Paris sababo la xiriira tallaal COVID-19 iyo kaararka caafimaadka
"Baasku ma dhaafi doono!" wuxuu ahaa heesta banaanbaxayaasha go'doominaya dhismaha gobolka Nantes.
Mudaaharaadyo ballaaran oo ka dhacay Faransiiska oo dhan ayaa ka dhacay Maalinta Bastille.
Isku dhacyo rabshado wata ayaa ka dhex qarxay banaanbaxayaasha iyo booliska magaalada Paris.
Booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku ridaya banaanbaxayaasha tuuraya dhagxaanta iyo dhalooyinka, isla markaana dab qabadsiiyay qalabkii dhismaha ee magaalada Paris, iyo dhismooyinka dowladda ee qurxinta.
Kumanaan mudaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada Paris si ay u dhigaan mudaharaad ay kaga soo horjeedaan Go’aanka dowlada faransiiska si looga dhigo talaalka coronavirus shaqaalaha caafimaadka isla markaana loo soo bandhigo kaarka caafimaadka ee lagu galo baararka, maqaayadaha, tiyaatarada iyo goobaha kale ee bulshada.
Mudaaharaadyo ballaaran oo ka dhacay waddanka oo dhan ayaa ka dhacay Bastille Day, sannad-guuradii 1789 ee duufaankii caanka ahaa ee Paris ee bilaabay kacaankii Faransiiska. Magaalada Paris gudaheeda, booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u cabudhiyaan banaanbaxayaasha.
Mudaaharaadyo ayaa ka dhacay guud ahaan Faransiiska Arbacadii iyadoo iska horimaadyo kulul ay ka qarxeen booliiska magaalada Paris. Booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku ridaya banaanbaxayaasha tuuraya dhagxaanta iyo dhalooyinka, qalabka dhismahana dab qabadsiiyay Paris, iyo dhismayaasha qurxinta ee guud ahaan Faransiiska, iyagoo ka jawaabaya Madaxweyne Emmanuel Macron wuxuu u dhaqaaqayaa anti-COVID-19.
Sawirro iyo fiidiyowyo laga soo qaaday magaalada caasimada ah ee Faransiiska ayaa muujiyay mudaaharaadayaasha oo dhiganaya dhufeysyo ka mid ah waxyaabaha laga helay goob dhisme. Qaar ka mid ah mashiinada dhismaha oo aan cidina la socon ayaa dab qabadsiiyay sidoo kale.
Magaalada Paris, muuqaal goobjooge ayaa qabtay dad ka cararaya sunta dadka ka ilmaysiisa iyadoo booliis la geeyay tiro aad u tiro badan si ay u kala qaadaan banaanbaxyada. Halbowlayaasha waaweyn ee magaalada ayaa la arkayay iyadoo ay xireen dibadbaxayaasha iyo booliska. Hal tusaale, qasacad sunta dadka ka ilmaysiisa ayaa ku dhacday meel u dhow maqaayada terrace, taas oo keentay in qolladii wax ka cunteeysay ay gudaha ku xardhaan.
Qoraallada warbaahinta bulshada ee ku saabsan mudaaharaadyada waxaa ka mid ahaa hashtags #PassSanitaire iyo #VaccinObligatoire, iyagoo tixraacaya ku dhawaaqista Isniinta ee Macron ee ah in shaqaalaha daryeelka caafimaadku ay ka tallaali doonaan COVID-19 ugu dambayn Sebtember 15, ama ay wajihi doonaan shaqooyinkooda.
Mudaaharaadyo yaryar ayaa ka dhacay meelo kale oo magaalada ka mid ah, iyadoo kooxaha qaar ay ku shireen meesha lagu magacaabo Place de Clichy.
Xanaaqa Faransiiska kuma koobnayn Paris, sidoo kale. Muuqaalo laga soo duubay dalka oo dhan ayaa muujinaya mudaharaadyo ka dhacay Toulouse iyo Marseilles oo ku yaal koonfurta, Haute-Savoie oo ku taal koonfur-bari, iyo Nantes galbeedka, iyo meelo kale.
Mudaharaadyo ayaa sidoo kale lagu qabtay Corsica, halkaas oo dadku isugu soo baxeen si ay u cambaareeyaan waxa ay ka soo horjeedeen ee ku saabsanaa weerarada xorriyadaha shaqsiga, iyagoo dalbanaya xuquuqda "ay ku leeyihiin dookhooda" talaalada COVID-19.
Sida laga soo xigtay warbixinnada internetka, in ka badan 1,000 qof ayaa socod ku maray magaalada ku taal koonfurta Faransiiska ee Perpignan.